Qualcomm Snapdragon 710: Nhazi usoro ohuru | Gam akporosis
Ọnwa ole na ole gara aga ka akwadoro ya Qualcomm na-aga ịmalite ezinụlọ ọhụrụ nke ndị nrụpụta. Ọ bụ maka Snapdragon 700, nke na-achọ ilekwasị anya n'etiti etiti na etiti dị elu. Ya mere, ha bịara ikpuchi ọdịiche dị n'etiti ezinụlọ nke 600 na 800. N'ikpeazụ, onye nhazi mbụ nke ezinụlọ ọhụrụ a bụ onye ọrụ ugbu a. Ọ bụ ihe gbasara Snapdragon 710.
Echiche nke nhazi a bụ ịnye ndị ọrụ a ahụmahụ yiri nke ahụ na ihe ha nwetara na njedebe dị elu, mana na ekwentị dị ọnụ ala. Ọzọkwa, dịka ị nwere ike ịtụ anya, ọgụgụ isi na-arụ ọrụ dị mkpa na Snapdragon 710.
Anyị na-ahụ ngụkọta nke cores asatọ na nhazi a. Abụọ n'ime ha bụ arụmọrụ dị elu, na ọsọ nke 2.2 GHz, ebe isii ndị ọzọ na-eru ọsọ ọsọ nke 1,7 GHz. Ọ ga-enwe nkwado maka ihe ruru 16 GB nke RAM. Nkọwa nke na-ahụbeghị, n'ihi na ọ bụ ihe ọhụrụ na ịnwe igwe nwere ikike a.
Snapdragon 710 nwekwara otutu isi maka ọgụgụ isi. O yiri ka ọ ga - abụ DSP Hexagon, nke dịlarị na ndị ọzọ na - arụ ọrụ Qualcomm. Ekwuru na ọ ga - enwe arụmọrụ ugboro abụọ nke onye bu ya ụzọ Snapdragon 660. Anyị na - ahụkwa ihe ngosi ihe ngosi Spectra 250 nke na ga-ekwe ka iji igwefoto ruo 32 MP ma ọ bụ ese foto abụọ ruo 20 + 20 MP.
Vidiyo 4K na-erute n'etiti etiti ekele Snapdragon 710. Ebe ọ bụ na processor ga-ekwe ka mmeputakwa. N'ihe gbasara njikọta, ọ ga-enwe modem X15 nke nwere ike ịnye ọsọ nbudata nke 800 Mbps. Na mgbakwunye, ọ ga-etinye 4 × 4 MIMO maka LTE na 2 × 2 maka Wi-Fi.
E wuru Snapdragon 710 na 10nm ije. Qualcomm kwadoro na nhazi ahụ dị njikere ugbu a na mmepụta. Ya mere ndị nrụpụta nwere ike ịmalite ịtụ ya maka ekwentị ha. Yabụ ọ ga - abụ na ọnwa ndị na - abịanụ anyị ga - ahụrịrị ngwaọrụ dị n'ahịa iji ihe nhazi ọhụrụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Snapdragon 710: Nhazi ohuru maka etiti
OnePlus 6 na-anata 5 si na 10 na akara iFixit